သီးလေးသီး (၁) | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
သီးလေးသီး (၁)	Posted by mm thinker on January 27, 2008
Posted in: Politics.	Tagged: Chiang Mai, Performance, Politics.	Leaveacomment
မနေ့က သီးလေးသီးသွားကြည့်သည်။ ၀င်လိုက်သည်ဆိုလျှင်ပင် ရုပ်သံအဖွဲ့၏ ကင်မရာရှေ့ ရောက်မိလျက်သားဖြစ်ကာ မိုက်ကြီးထိုးပြီး ရုတ်တရက် အဗျူးခံလိုက်ရသည်။ ဘာတွေမျှော်လင့်ထားလဲဆို တော့ ဘာညာပေါ့ ဖြေလိုက်တယ်။ နည်းနည်းနဲ့ ကြဲရတဲ့ အဖွဲ့ဆိုတော့ လူရွှင်တော်တွေက ဗုံ၊ ပတ္တလားပြေးတီးလိုက်၊ မိုက်ရှေ့ပြန်ပြေးပြီး ပြက်လိုက်ပေါ့။ စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ ပွဲပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ အာခံရဲတဲ့ သတ္တိကိုတော့ မချီးကျူးဘဲ မနေနိုင်ပါ။ ကြောက်တဲ့သူတွေက ကြောက်လို့ မကြည့်ကြ။ နိုင်ငံရေးအကြောင်း လေဖောင်တဲ့လူတွေကလည်း ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင်။ သင်ကာကတော့ လက်ဝါးနှစ်ဖက်လုံးနာအောင်ပင် လက်ခုပ်တီး အားပေးခဲ့ပါသည်။
← ယာယီကဗျာဆရာ၏ ထာဝရပုံရိပ်မှတ်တမ်းများ (ဒုတိယပိုင်း)	သီးလေးသီး (၂) →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...